Isifundo sisebenzisa iApple Watch njengesixhobo sokusebenza kwi-apnea yokulala kunye noxinzelelo lwegazi | Ndisuka mac
Isifundo sisebenzisa iApple Watch njengesixhobo sokusebenza kwi-apnea yokulala kunye noxinzelelo lwegazi
I-Apple Watch izibeka njengeyona mhlobo ubalaseleyo ekuchongeni isifo sentliziyo kunye nokuphefumla. Abaphandi kwiYunivesithi yaseSan Francisco, ngentsebenziswano nabaphuhlisi besicelo ICardiogram Basebenzisa ii-Apple Watch sensors ukufumanisa i-apnea yokulala kunye noxinzelelo lwegazi, ngenxa yenqanaba labo lokuchaneka. Ukongeza, kwisigulana, kuncinci kakhulu ukwenza uvavanyo ngewotshi yeApple, xa kuthelekiswa nokusebenzisa iisenzi zomzimba wonke emzimbeni, ngelixa uphumla ubusuku bonke. Ke ngoko, isikhokelo esitsha kuvulelwa isixhobo se-Apple malunga nonyango lwezi zifo.
Kwisifundo esenziwe kwiYunivesithi yaseSan Francisco, ngabantu abangama-6115 abathathe inxaxheba, abaphethe iApple Watch kunye nesicelo sayo ICardiogram. Iyunivesithi isebenzise ialgorithm yokufunda egama lingu com NzuluHeart. Njengalo naluphi na uphononongo lweenkcukacha manani, iziphumo zafunyanwa kwi-70% yesampulu kwaye i-30% eseleyo yafunyanwa.
UJohnson Hsieh, Umseki-ntsebenziswano weCardiogram, ucacisile kudliwanondlebe neTechCrunch:
Sizimisele ukuba, ngesampulu efunyenwe kubantu abanexinzelelo, sinokuchonga abanako. Ukusuka apho, ugqirha uya kubakhokelela kwisifo esifanelekileyo sokugqibela, ngoxinzelelo lwegazi kunye nokulandela unyango.
Into yokuqala abayenzayo abaphandi kukubona ukuchaneka kwe-Apple Watch. Iziphumo ezifunyenwe ngokunxulumene ne-apnea yokulala, zifikelele kwi-90% ngokuchanekileyo, ngokubhekisele kwiinkqubo zobungcali nezipheleleyo.
Kuqikelelwa ukuba e-United States kuphela, ubuncinci abantu abayi-22 yezigidi banesifo esishiya isigulana singaphefumli ngelixa silele. Ke ngoko, ukubanakho kwabathengi abanokuba neApple Watch esihlahleni sabo ukulawula umgangatho wokulala kwabo, kunokukhula ngokucacileyo. Ngokumalunga noxinzelelo lwegazi, kuqikelelwa ukuba i-US inabemi abangaphezu kwezigidi ezingama-70 abanokulawula ezi ngxaki ngewotshi yeApple
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Isifundo sisebenzisa iApple Watch njengesixhobo sokusebenza kwi-apnea yokulala kunye noxinzelelo lwegazi
Ngaba uyafuna ukuba nedama le-Koi kwi-Mac yakho? NgeKoi Pond 3D kunokwenzeka
Yiya kwi-Gmail, umxhasi owahlukileyo olawula iakhawunti yethu yeGmail